पत्रुस Shilton: जीवनी, उपलब्धि
पत्रुस Shilton ठीकै इङ्गल्याण्ड को सबैभन्दा ठूलो गोल रक्षक भनिन्छ गर्न सकिन्छ। उहाँले 1990 मा राष्ट्रिय टोलीमा आफ्नो क्यारियर समाप्त भएपछि ब्रिटिश अब गेट को सुरक्षा बारेमा निश्चित हुन सक्छ। धेरै हदसम्म यो टोली वा छैन किनभने प्रमुख फुटबल प्रतियोगिताहरू मा पतन, वा तिनीहरूले बाहिर जान्छ जब नराम्ररी कार्य।
लेस्टर देखि मान्छे
पत्रुस Shilton छिट्टै दोस्रो विश्व युद्ध पछि, 1949 मा, अंग्रेजी लेस्टर मा जन्म भएको थियो। छैन अचम्मको कुरा, त्यो eponymous क्लब पछि आफ्नो क्यारियर सुरु भयो। को युवा टोली पहिलो र 1966 देखि पहिले नै वयस्क टोलीमा।
"लेस्टर" इङ्गल्याण्ड (एनालग वर्तमान प्रिमियर लिग) को प्रथम श्रेणी च्याम्पियनशिप बोल्ने, तर बचाउको लागि संघर्ष गर्दा। फलस्वरूप, 1969 मा टोली अन्तिम भयो र दोस्रो विभाजन गर्न गए।
फिर्ता कुलीन2वर्ष पछि, धन्यवाद हदसम्म जवान Shilton एक शानदार खेल गर्न असफल भयो। 1971 मा, "लेस्टर" सबै च्याम्पियनशिप (केवल 30 42 खेल मा लक्ष्य) को सानो छुटेका र निर्धक्क भई प्रथम स्थान, "शेफील्ड संयुक्त" पिटाई3अंक जित्यो।
आफ्नो पैतृक शहर देखि टोलीमा लागि कुल, पत्रुस Shilton 286 मिलान प्ले, 8 मौसम बिताए।
1974 मा Shilton "स्टोक सिटी" मा "लेस्टर" प्रतिस्थापित भएको छ, र चाँडै "नोटिङ्हाम वन" गए। यो क्लब संग छ, र यो मात्र क्यारियर शीर्षकमा आज्ञा पालन गरे।
मौसम मा 1977/78 का Shilton मात्र होइन च्याम्पियनशिप, तर कप फुटबल लिग विजेता, दुई पटक गोल गरेका थिए। "नोटिङ्हाम" इतिहास मा पहिलो पटक लागि च्याम्पियन भए, र धन्यवाद हदसम्म अन्तिम पालो मा मजबूत खेल। 42 खेल मा टीम बस 24 लक्ष्य स्वीकारियो। चाँदी पदक विजेता "लिभरपूल" धेरै7रूपमा अंक पछि परे।
यसरी, "नोटिङ्हाम" को अर्को सिजन लागि युरोपेली कप खेल्नको लागि सही गर्यो। आरेखित ब्रिटिश अत्यन्तै असन्तुष्ट थिए। "लिभरपूल" - इङ्गल्याण्ड को च्याम्पियन्स को पहिलो राउन्ड मा उपाध्यक्ष-च्याम्पियन गए। यसलाई भनिन्छ रूपमा "नोटिङ्हाम" "Foresters",, घर2मा विजयी: 0, र एक अतिथि एक goalless तान्ने मा सन्तुष्ट थिए।
दोस्रो राउन्ड उहाँले ग्रीक AEK द्वारा पराजित भएको थियो - 2: 1 अतिथि र 5: 1 घर मा, र स्विस "फट्याङ्ग्रा" को 1/4 फाइनल मा - 4: 1। फिर्ती मिलान एक तान्ने मा समाप्त भयो।
को सेमिफाइनलहरू मा, ब्रिटिश प्रतिद्वन्द्वी जर्मन "कोलोन" गए। पहिलो खेलमा भयातुर र लक्ष्य मा प्रशस्त हुन बाहिर गरियो। 2: 20 औं मिनेट द्वारा जर्मन0थिए। तर Borlts, Bower र Robertson को "नोटिङ्हाम" सार्दा अगाडि, बैठक को पाठ्यक्रम गरियो। दुर्भाग्यवश, हामी विजेता स्कोर राख्न सकेन। Okudera अन्तिम सीटी अघि5मिनेट गोल गरेका थिए। धेरै मानिसहरू यो दोषी नही पत्रुस Shilton थियो विश्वास गरे। गोल रक्षक निकै भोगे र redoubled एकाग्रता आयोजित एक फिर्ती मिलान, एक लक्ष्य नतिजा निर्णय जो गोल Bower, "नोटिङ्हाम" जित्यो 1: 0।
अन्तिम मा, ब्रिटिश स्वीडिश "मैल्मो" भेटे। यो सभामा सबै 45th मिनेटमा ट्रेवर फ्रान्सिस प्रहार मात्र झटका निर्णय गरे। त्यसैले पत्रुस Shilton एक प्रमुख युरोपेली क्लब पदक जित्यो।
"नोटिङ्हाम" संग युरोपेली कप Shilton र निम्न वर्ष जित्यो। अन्तिम मा पनि 1 को एक स्कोर संग:0जर्मन कुटपिट "हैम्बर्ग" थियो।
बेलायतमा Shilton उमेर 20 वर्ष मा आफ्नो debut गरे। साँचो, राष्ट्रिय टोली वर्ष मात्र 10 एक प्रमुख प्रतियोगिताको अघि 1980. पछि तिनीहरू भयो इटाली युरोपेली च्याम्पियनशिप पुगेको छ।
1 त्यसपछि0हराएको: 1, र अन्तिम राउन्ड अघि मालिक समूह विजेता को मौका गुमाए 1 - ब्रिटिश बेल्जियम विरुद्ध तान्ने साथ सुरु। फलस्वरूप, यस Spaniards पराजित थिए - 2: 1, तर कारण बेल्जियम र इटाली goalless तान्ने चित्रित गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई गर्न, अल्बियन टोली मात्र तेस्रो बाँकी छ।
जहाँ त्यहाँ 1982 मा स्पेन मा एक सफल विश्व कप थियो, इङ्गल्याण्ड टीम3WINS स्कोरिङ, पहिलो स्थान बाट समूह बाहिर र दोस्रो समूह चरण फसे। Shilton Piter त्यहाँ शासनकालमै। फुटबल टोली malorezultativny देखाए। फलस्वरूप, ब्रिटिश को ढोकाहरू जस्ताको तस्तै रह्यो, तर तिनीहरूले दुई शून्य ड्र संग स्कोर गर्न सकेन - जर्मनी र स्पेन संग। को सेमिफाइनलहरू एक परिणाम प्रतियोगिताको होस्टहरूको पिट्न व्यवस्थित गर्ने जर्मन, झिकिएको छ।
परमेश्वरको मेक्सिकन हात
सबैभन्दा प्रशंसक मा खेल मा पत्रुस Shilton सम्झना विश्व च्याम्पियनशिप मेक्सिकोमा 1986। दुई वर्ष मा टीम अघि कि यूरो छुटेका र प्रशंसक परिणाम लागि प्रतीक्षा थियो।
पहिलो खेलमा एक तीतो संघर्ष ब्रिटिश अन्त अघि एक घण्टा को एक चौथाई मा मात्र लक्ष्य conceding, को पोर्चुगिज तरिका दिनुभयो। र त्यसपछि मोरक्को को राष्ट्रिय टोली हरायो सकेन - 0: 0। जमानत मात्र डंडे विजय पत्यार पार्र्ने सकेन। र यहाँ आफ्नो सबै महिमा मा आफूलाई देखाए गैरी Lineker, एक टोपी-चाल गोल गरेका थिए।
0, यो समय Lineker एक डबल बनाउँछ, र फेरि ब्रिटिश को ढोकाहरू जस्ताको तस्तै पात Shilton Piter: पाराग्वे, र फेरि विजय3- 1/8 अन्तिम प्रतिद्वन्द्वीको मा। को गोल रक्षक को जीवनी अर्जेन्टिना संग अर्को खेलमा पौराणिक धन्यवाद भएको छ।
पहिलो आधा कुनै लक्ष्य ल्याए, तर दोस्रो मामला, फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा प्रसिद्ध लक्ष्य एक को सुरुमा। 51 मिनेट पछि फर्वार्ड अर्जेण्टीनी डिएगो Maradona को अंग्रेजी लक्ष्य छेउमा एउटा असफल पास गरे, बल छेउमा भएको दण्ड क्षेत्र उसलाई फाले गर्ने हाज, गर्न परे। पत्रुस Shilton (183 सेन्टिमिटर अग्लो छ), गेट बाहिर भाग्यो आफ्नो मुट्ठी संग बल दस्तक आशा, तर Maradona पहिलो थियो, र आफ्नो बायाँ हातले गेट उसलाई पठाए। Tunisian रेफरी अली बिन nasser एक गोल गरेका थिए, र Maradona पछि यो एक "परमेश्वरको हात" बताए। 1: अर्जेन्टिना2जित्यो।
Shilton रेकर्ड विशेष उल्लेख दिनुपर्छ। इङ्गल्याण्ड लागि प्रदर्शनमा - 125 (स्वीकारिएको मात्र 80 गोल संग)। 1391 खेल र राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप मा सभा को संख्या लागि बेलायत रेकर्ड - - 1005 उहाँले सरकारी म्याचको संख्या लागि विश्व रेकर्ड धारण।
राष्ट्रिय टोली Shilton उहाँले लगभग 41 वर्ष हुँदा 1990 मा विश्व कप मा आयोजित लागि आफ्नो अन्तिम खेलमा। 10 मिलान - उहाँलाई लागि, यो दुनिया च्याम्पियनशिप को फाइनल मा 17 बैठक (ब्रिटिश लागि रेकर्ड), र उहाँले फ्रान्सीसी Fabien Barthez संग पहिलो स्थान साझेदारी विश्व च्याम्पियनसिप मा "ड्राई" खेल को संख्या थियो।
Oleg Pashinin: जीवनी
जर्मन रक्षक MARSEL Shmeltser
के म आफ्नो पेटमा ट्याटुहरू बनाउनेछु?
जिब्रोको नोकरले बिस्तारै भने के गर्नु पर्छ: कारणहरू र उपचार
गजेबो: आफ्नो हातमा स्क्रैप सामाग्री बाहिर एक रोचक वास्तु तत्व सिर्जना गर्न
क्यारियर कोस्टा Rican फुटबल खेलाडी ब्रायन Ruiz
"Lanvin Eklat" - इत्र को दुनिया मा एक साँचो कृति
काटयो Garden Resort3* फुकेत द्वीप, थाईल्याण्ड होटल विवरण, समीक्षा
बाल श्रम को शोषण: कानून, विशेषताहरु र आवश्यकताहरु
Blisters। उनको काखमा Dropsy। खुट्टा मा Dropsy
नङ च्याउ बाट चिया रूख तेल - प्रभावकारी उपचार